Imepụta & Injinia
Mgbakọ & ihe ndozi
Akpụkpọ anụ karịrị akarị
Ụdị Akpụkpọ anụ
Multi Cavity ebu
Akụrụngwa ngwaọrụ ahụike
Omenala Plastic Molds
Akpụkpọ Ngwa Ụlọ
Otu Shot & 2K Mold
Akpụkpọ anụ dị elu nkenke
Onye na-agba ọsọ oyi & Igwe na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ
Lee, Osisi Injection Molding ọhụrụ anyị!
YF Mold na-amalite dị ka onye na-emepụta ebu, anyị na-eji nkenke, ihe ọhụrụ na ịrụkọ ọrụ ọnụ na-eduga ụzọ. Ahụmahụ anyị na ikike anyị na-abara ndị ahịa anyị uru n'ọtụtụ ụzọ, dị ka inye ndụmọdụ na obere mgbanwe mgbanwe, nke na-enyere ndị ahịa anyị aka ịchekwa oge na ego. Ndị otu anyị na-ebu nkà ihe ọmụma na nlebara anya ...
Ụzọ isii iji bulie ndụ ngwá ọrụ
Ndụ ngwá ọrụ abụrụla ihe dị mkpa na-emetụta uru nke onye na-emepụta ihe ntụtụ. Ọ bụrụ na enwere ike iji ụzọ ezi uche dị na ya mee ndụ ịkpụzi karịa ihe ndị a chọrọ, mgbe ahụ, uru nke ụlọ ọrụ ahụ ga-akawanye mma. Nke a bụ ụzọ ụfọdụ isi melite ndụ ebu. 1. ziri ezi...
Ihe atọ ị na-enweghị ike ileghara anya mgbe a na-ezo aka na ịkpụzi
Na 20 + afọ 'ahụmahụ na plastic ịkpụzi na plastic akụkụ mmepụta, YF Mold nwere ahụmahụ engineering imewe na toolmakers otu. Anyị na-agba mbọ izute ma gafere ebumnuche na atụmanya ndị ahịa anyị. N'oge ịkpụzi, ihe atọ anyị kwesịrị ịṅa ntị 1. You can't ju...
site admin na 20-12-22
Taa, ndị otu anyị ji obi ụtọ nabata Jan, CEO nke otu ụlọ ọrụ mba ụwa nke Belgium na ndị otu ya gụnyere ndị injinia mmepụta ngwaahịa, ndị na-azụ ahịa na ndị injinia ọrụ na ụlọ ọrụ anyị. N'ịbụ ndị ọkachamara na ihe siri ike chọrọ, ha na-emegharị ...
Ọkachamara nkenke ebu na onye nrụpụta
© Nwebiisinka - 2010-2021: Guangdong Yuanfang Technology Industry Co., Ltd. Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị
Onye na-emepụta injection injection plastik, Ịtinye Plastic Molding, Ndị na-emepụta Mold Prototype, Ụlọ ọrụ ebu, Ndị na-emepụta ebu, Ịkpụzi injection na ntinye ígwè,